5 Siyaabaha Download Music inay iPhone
Habka duuban ama ku daray music galay iPhone ah waxaa loo yaqaan syncing. Waa habka aasaasiga ah in maktabadda Lugood aad wareejiyo music si adiga kuu gaar ah iPhone . Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu wareejiyo wax kale sida podcasts, sawiro, videos, iwm si aad iPhone.
Syncing waa mid aad u fudud oo, aad dirqi yeelan doonaan in ay ka walwalaan wax ku saabsan oo mar baad u samaysay markii ugu horeysay.
Part2: Download music inay iPhone via app
Part3: Downloads Music ka goobood oo si iPhone
Part4: Saxiixa music inay iPhone taleefanada kale ama qalab
Connect aad iPhone in aad PC. Burcad Lugood marka aad furaysto ee iPhone haddii Lugood, hore ayaa loo soo ordaya.
Marka iPhone waxaa ku xirnayn, waxaad arki doontaa bandhig maamulka iPhone. Waxay leedahay hoos ku image iPhone u ah xallinta noocyada kala duwan ee ka kooban tabs. Riix tab music taas oo ah tab saddexaad hoos ku image iPhone ah.
Your doorasho waxay kala yihiin:
Hagaagsan Library Dhan, taas syncs oo dhan music ee maktabadda Lugood in aad iPhone. Tani waxay ka shaqeyn doonaan oo kaliya haddii maktabadda Lugood waa yar yahay awooda iPhone si kale, kaliya qaybta in iPhone ee awoodda qaadan kartaa in la synced doonaa.
Hagaagsan playlists soo xulay, fannaaniin, iyo qaybaha, taas oo kuu ogolaanaya in aad doorato waxa music galo aad iPhone.
Artists u hagaagsan, playlists doortay iyo qaybaha music aad siin doorasho badan waxa music tagaa in aad iPhone.
Marka aad sameeyey oo dhan ee aad kala doorato iyo go'aamiyo waxa songs download in aad iPhone, riix "codso" button ee xaq u hooseysa ee suuqa kala Lugood ah. Tani waxay si toos ah u soo bixi doonaa heeso aad iPhone. Waqtiga ay qaadanayso waxay ku xiran tahay tirada files music aad duuban si aad iPhone.
Kadib markii geedi socodka nidaamka dhamaato, guji icon tuurid ag image iPhone ka galeeysid ku bidix si tuurid aad iPhone. Music ayaa hadda soo bixi in aad iPhone diyaarna u yahay inuu la dhagaystaa aad iPhone!
Dhammaan barnaamijyadooda music hoos ku qoran yihiin gebi ahaanba bilaash ah oo la jaanqaadaan qalabka iPhone iyo Android. Isticmaal xiriirka hoose mid kasta in ay helaan ama inaad kala soo baxdo kuwa dukaanka web aad iPhone ama Android qalabka ka.
Qodobbadani Cloud qoreysa badan oo qaniinyada dhawaaqa iyo kuwan raadkaygay uploaded by kuwa kale ee isticmaala; Sidaas daraaddeed waxaa ka kooban labada music iyo codka oo macmal ah ka fannaaniin jira iyo soo socda.
Playlists laga dhisi karin iPhone si ay u sameeyaan socodka ah ee music aad jeceshahay iyo wadaagaan playlists ah. Qaar ka mid ah qalabka xitaa ha idin ​​geliyo oo diiwaan codka shakhsi aad u leedahay iyada oo loo marayo barnaamijka.
Si aad u hesho music la app Sound Cloud, raac tallaabooyinkan.
Talaabada 1: Download ku app Sound Cloud ka App Store by raadinaya.
Talaabada 2: Orod app ee ka screen guriga marka download waa dhameystiran.
Talaabada 3: Raadi music aad rabto ama caleenta iyada oo liiska music iyo tuubada on music gaarka ah.
Barnaamijyadooda kale inay muusikada inay iPhone
Lugood Radio jawaab Apple ay ku Pandora, Radio Pandora, adeeg music style geeyo ah oo dhista playlists ay ku salaysan muusikada tuma ama heesaha user a jecel yahay. Inkasta oo aanay ahayn arrin sida la safeeyey sida Pandora oo aan la yaab leh; Pandora qaaday sanado badan oo aan kaamil ka qurbaankiisii, waxaa la dhisay Lugood iyo macruufka iyo ula dhexgeliyey Lugood ah, qeybinayay badan oo music aad u fiican oo bilaash ah.
iHeart Radio ayaa kugu daboolay, sida ay leedahay xayeysiis eber, sifooyinkaa cajiibka ah, waxa ay taageertaa badan oo telefoonada, iyo caasimadii idaacadaha dhow si fudud ay dhacdo in kaliya aad u baahan tahay barnaamijka raadiyaha ku saabsan app mobile ah.
Waxa kale oo aad maqli laga yaabaa in podcasts iyo soo saaro aad shakhsi saldhigyada music ku salaysan Gurtida jecel adiga kuu gaar ah, ugaarsiga loogu jiro saldhigyada, oo soo eeg in koox sida 80s iyo 90s hits, kale, fasax, classical, Oo dhagax weyn, oldies, iyo wax ka badan si aad u hesho music aad ugu raaxaysan doonaa.
Saldhigyada aad jaceshahay waa la badbaadin karaa presets iyo kaalinta sida saacada ah buuxiso la isticmaalayo doorashada snooze iyo barnaamij maalin-to-day. Radio iHeart waxaa intaasi dheer oo kuu ogolaanaysaa inaad aragto Biography artist ah, lyrics aragto sida aad dhagaysan, iyo wadaagaan saldhiga ah.
Xaaladdan oo kaliya aad u baahan yihiin inay maqlaan adiga oo ad-xor ah oo ku go la lahayn idaacadaha ama music waa la rabin helo habka ugu, Google Play Music maktabadda music shakhsi ahaaneed waa barnaamijka ugu wanaagsan ee ay tan u sameeyaan. Waxaa suuragal ah in aad u ciyaaro aad music in hab shaandheeyn, gacanta xulo heeso gaar ah mar walba la ciyaaro xayiraad, ama si fudud loo abuuro playlists caadadii.
Marka aad lahaa barnaamijka muddo ah, waxaa laga yaabaa in aad bilowdo a "Waxaan dareemayaa inaan isku darka barakaysan" inuu u ciyaaro dhawaaqa maktabadda kuu gaar ah oo ku salaysan music aad dhagaysan ugu, ama horumariyaan isku dhafan ee caadiga ah ka habayn kasta inuu ka ciyaaro music la mid ah, waxa uu.
Waxaa suurto gal ah in ay isku qori ah pass helaan oo dhan, kaas oo kuu ogolaanaya in aad si loo badbaadiyo oo ay helaan heesahaaga xisaab adiga ku gaar ah lacag bil kasta, haddii ay dhacdo in aad bilowdo lahaa inuu jeclaan Google barnaamijka Music more Play. Google Play Music hawlgasha browser ah ee intaa dheer in barnaamijka.
Songza waa app gaar ah music in ay soo saartaa music ku xiran tahay wax gaar ah sida dabeecaddiisa (dabaal, funky, iwm hypnotic), muddo toban sano ah, tallaabo ah (xisbiga casho aan joogtada ahayn, xisbiga qoob iwm), ku sifayn music ah, iyo kuwa kale sida cusub ku daray, music u wadida, music faraxsan, iyo cayn kasta badan oo kale.
Mid ka mid ah qayb ka mid ah barnaamijka lagu magacaabo taalaa siinaysaa aad music badasho waxaad samaynayso wakhtigaas. Tusaale ahaan, haddii aad doorato in aad ka shaqeeya, waxaa idin siin karaa music lyrics in uu leeyahay ma sida Retro ama audio qalabka daarmayaay'e.
Part3: Music downloads ka goobood ee PC, kala iibsiga ka PC in phone via TunesGo
Mid ka mid ah hababka ugu fiican oo ugu fudud ee degsado music aad iPhone waa adigoo isticmaalaya app TunesGo si toos ah. TunesGo taageertaa download of music ka goobood oo kala duwan. Waxaan eegi doonaa sida loo download music inay iPhone isticmaalaya app TunesGo.
Waxaan marka hore kala soo bixi doonaa music la app TunesGo markaas wareejiyo music si ay noo iPhone isticmaalaya app TunesGo ah.
Waxaa jira laba hab oo ay u tagaan oo arrintan ku saabsan.
Dhajinta link music si toos ah u download
Eegay goobta YouTube iyo degsado music ka jiraan
Si aad u download music wax ka YouTube isticmaalaya app TunesGo ah, raacaan hababka hoos ku qoran.
Talaabada 1: ka desktop fur app TunesGo ah.
Talaabada 2: Riix "Online music" tab by dhinaca bidix ee suuqa kala TunesGo ah.
Talaabada 3: dhaji link ee music aad rabto in aad ka soo dejisan YouTube oo riix badhanka download ag link ah.
App TunesGo ayaa bilaaban doona degsado music aad u.
Tallaabo 3: Iyadoo suuqa kala ah app TunesGo, guji goobta link YouTube.
Talaabada 4: Raadi ama caleenta iyada oo goobta si ay u soo bixi music aad rabto.
Riix "Download" badhanka ugu sareysa link video dhinaceeda inay muusikada ah.
Si aad u hubiso music aad soo bixi, guji "degsan" tab ka menu ee dhinaca bidix ee suuqa kala TunesGo ah.
Bedelka music aad iPhone
Talaabada 1: Isku aad iPhone ama iPad si aad u computer.
Talaabada 2: Dooro qalab aad ka yar "Qalabka".
Talaabada 3: Riix ah "Music Transfer ka Lugood in Device".
Talaabada 4: Dooro "maktabadda Dhan" si ay u gudbiyaan music oo dhan soo bixi ama soo xulay playlists in ay doortaan music iyo riix "Transfer" button.
Waxaad si guul wareejiyo music aad iPhone si fudud oo dhaqso leh app TunesGo ah.
Ka faahfaahin dheeraad ah si ay u gudbiyaan music inay iPhone ka telefoonada ama qalab kale oo >>
> Resource > iPhone > 5 siyaabo inay muusikada inay iPhone